xitaa haddii aadan waa taageere weyn u ah Cash Buster ka IWG, aad jeclaan doonaa ciyaarta cusub iyaga ka Super Cash Buster bixiyaa abaalmarino waaweyn oo ka wanaagsan Cash Buster. Tani dhigeeysa free deposit ma loo baahan yahay ciyaarta keentaa in aad abaalmarino badan oo xiiso leh iyo culaysyo oo xiiso leh.
About sameeysa ee boqortooyada Wealth
IWG waa horumariyaha a sare iyo alaab-of online, kulan guul degdeg ah, waayo, bakhtiyaa caan ah oo ka shaqeeya khamaarka. Shirkadda dhigaysa kulan iyo this si qoto dheer mashquuliya iyo xiiso dhigeeysa free deposit ma loo baahan yahay ciyaarta waa mid ka mid ah.
Tani dhigeeysa free deposit ma loo baahan yahay kulanka waxaa la ciyaaray isticmaalaya qorniin la duubo ee laadhuu halkii duntu caadiga ah iyo dhigeeysa. Ka hor inta aadan bilaabin jabiyo blocks ah, aad u baahan tahay si ay u dejiyaan aad bet. Oo aad u bet in lacagta loo baahan yahay adigoo gujinaya (+) iyo (-) badhamada. Marka aad dhigay bet ah, riix PLAY si aad u bilowdo. Waxaad heli doontaa 8 duub of a laadhuu midabka, si fudud u rogo laadhuu this inuu u muujiyo midab. block ee midab isku mid ah oo ay la socdaan block kasta koontoroolidda midabka la mid ah waxaa lagu dhufan doonaa goobta ciyaarta. miiska abaalmarinta waxaa ku jira saf boosaska loogu talagalay midabyo kala duwan. Tirada blocks burburay goobta ciyaarta ayaa go'aamin doona sida boosaska badan oo color in la buuxiyay miiska abaalmarinta. Sidaas, tusaale ahaan, haddii aad burburay 4 oo ka mid ah blocks cas ee aagga ciyaarta, 4 naadi ee isku xigta cas waxaa ka buuxsami doona miiska abaalmarinta. Waxa kale oo aad fursad ay ku soo ururiyaan muuqaalada dheeraad ah iyo abaal-marinno dagdag ah u hesho sidii aad u jabiyo blocks ah.
Muuqaaladan oo dheeraad ah in this dhigeeysa free deposit ma loo baahan yahay ciyaarta yihiin:
Marka aad yareyso block a kaas oo Roll dheeraad ah soo bandhigay waxa on, waxaad ka heli duudduuban dheeraad ah oo laadhuu.
Marka aad yareyso block a taas oo uu leeyahay lacagta abaalmarinta bandhigay waxa on a, waxaad ka heli lacagta abaalmarinta in.
Marka aad yareyso block a taas oo uu leeyahay kulanka mini soo bandhigay waxa on, aad u hesho in ay ciyaari a mini-ciyaar.
Marka aad buuxiso ilaa xigta oo dhan midabka a miiska abaalmarinta, waxaad ka heli abaalmarinta bandhigay saf in.
Waxaa waa ku weyn yahay, waayo, kuwii horay u soo ciyaaray Cash Buster, laakiin waxaa la riyaaqay doona bilowga ah ee si siman. RTP The for this free dhigeeysa deposit loo baahan yahay ma kulan ku saabsan yahay 88.25%.